ICJ oo dhageysanaysa Kiiska Badda | KEYDMEDIA ONLINE
ICJ oo dhageysanaysa Kiiska Badda
Maxkamadda ayaa la filayaa inay sii wado dhageysiga kiiska Badda, iyadoo ay ka maqan tahay Kenya.
HOLLAND - Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda ICJ, ayaa loo qorsheeyay inay bilawdo Maanta dhageysiga ku saabsan muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.
ICJ ayaa sheegtay inaysan bedeli doonin jadwalka dhageysiga, iyadoo ay Kenya ka baxay dacwadda kadib markii loo diiday dib u dhigid afraad, si ay ugu soo diyaargarowdo.
Kenya waxay kaloo sheegtay inay cadaalad darro dareemayso, iyadoo farta ku fiiqday qareenka u dhashay Soomaaliya Cabdulqawi Axmed Yuusuf, oo ku lug leh Kiiska, kaasoo dhawaan ka degay xilka Madaxweynaha ICJ.
Kooxda sharciga ee Soomaaliya ayaa marka hore soo bandhigi doona doodahooda afka ah, inta u dhaxeysa 3 PM ilaa 6 PM maanta oo Isniinta ah, waxayna sii wadi doonaan doodooda illaa Talaadada inta udhaxeysa 3 PM ilaa 4:30 PM.
Soomaaliya ayaa dacwada u gudbisay ICJ oo fadhigeedu yahay Hague August 2014 kadib markii ay labada dhinac ku guuldareysateen inay kiiska ku xaliyaan qaab hoose iyo wadahadallo.
Kenya waxay su’aal gelisay inay maxkamaddu awood u leedahay dhageysiga dacwaddan iyo in kale, iyadoo ku doodaysa inuu jiray heshiiskii is-afgaradka ee MOU ee la saxiixay 2009-kii.
Muranka ayaa ku saleysan qaabka loo cabirayo xuduud badeeda u dhaxeysa labada dal, oo midba midka kale u dagaalamaya qeyb laga helay shidaal badan.
Soomaaliya ayaa doonaysa in cabbirka xadka badda si toos ah loola dharariyo xadka dhulka, halka Kenya ay dooneyso in la weeciyo, kaasoo si cad ugu soo gudbaya xadka dalka.
Xukunkan ay gaarto ICJ rafcaan lagama qaadan karo, maadaama aysan jirin heerar kale oo maxkamdeed, laakiin fulintiisa waxay ka go'daa Gollaha Amniga ee Qaramada Midoobay, oo Kenya ka ah xubin aan joogto ahayn.